Soo Iibso Madaxa Midabbada Kala Duwan ee Dibadda - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
Noocyada Kala Duwan ee Kusaabsan
Hal cabir / 1 Hal cabir / 2 Hal cabir / 3 Hal cabir / 4 Hal cabir / 5 Hal cabir / 6 Hal cabir / 7 Hal cabir / 8 Hal cabir / 9 Hal cabir / 10 Hal cabir / 11 Hal cabir / 13 Hal cabir / 14 Hal cabir / 15 Hal cabir / 17 Hal cabir / 18 Hal cabir / 19 Hal cabir / 20 Hal cabir / 21 Hal cabir / 16 Hal cabir / 12
Midabbo Badan oo Madaxa Dibedda ah - Hal Cabir / 1 gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Features: Ujeedooyin badan, Neefsasho, Wicitaan, Ka-Hortagga Dambiyada
Details: 100% cusub, tayo wanaagsan! Waxyaabaha: Polyester microfiber ah oo fidsan oo neefsan kara. Naqshadeynta: 22 qaababka qaabdhismeedka gaarka ah Cabbirka: 50 * 24cm / 19.7 * 9.4in. Ku habboon dharka maalinlaha ah, isboortiga bannaanka, ama xitaa dharka! Shaygaani wuxuu hadiyad weyn u yahay qof kasta oo leh awooddiisa isticmaalka badan. Miisaanka: 28g / 0.99oz Features: Waqti la duubo! U isticmaal xijaabyada si qurux badan loo qaabeeyey siyaabo fara badan si aad ugu darto waxoogaa xariif ah dharkaaga maalinlaha ah. Naqshado gaar ah oo lagu amaano dharkaaga. Ku raaxeyso beddelida habka aad ugu isticmaasho kuwan dharkaaga. Xidho iyaga sida foulad, bandanna, shalmad, duuduubka curcurka, beanie, koofiyad burcad-badeed, duubka madaxa, ama saccharine-kii ku habboon qaabkaaga gaarka ah iyo dookhaaga. In ka badan 12 shaqooyin kala duwan, kuwan ayaa hadiyado waaweyn u sameeya qof kasta; hadaba ula dhaqan qofka aad jeceshahay shay hal abuur leh oo waxtar leh. Tani waa la laabi karaa oo la qaabeyn karaa si ay ugu habboonaato baahiyahaaga si habboon. Haddii aad ku raaxeysato waxqabadyada bannaanka, waxyaabahaani waxay sameeyaan xargaha koofiyadaha cajiibka ah ama wajiga si looga ilaaliyo wejigaaga waxyaalaha jira. Waxaa laga soo dhisay polyester-ka microfiber-ka, xijaabyadan madaxa waa kuwo fidsan oo neefsan kara. Marooji kasta wuxuu cabiraa 19 "x 9.5". Tusmada xirmooyinka 1 x Qalabka Isticmaalka badan